अचानक धनी हुँदा मानिसले गर्छन् यी १४ काम !! | सुदुरपश्चिम खबर
१.मानिसले धनी हुने बित्तिकै गरिरहेको कामलाई चटक्कै छोडिदिन्छन् । काम छोडेपछि समयमा अफिस जान पनि परेन । यो भएन, त्यो भएन भनेर हैरान पार्ने हाकिमको गाली पनि खानुपरेन । र, सँगै काम गर्ने मानिसले दिने तनावबाट पनि मुक्त हुन पाइयो ।
२.हरेक मानिसलाई आफूले मन पराएको ठाँउ घुम्ने प्रकट इच्छा रहेको हुन्छ तर पैसाको अभावमा त्यो इच्छा इच्छामा नै सिमित भएको हुन्छ । त्यसैले धनी हुने बित्तिकै मानिसले गर्ने अर्को काम भनेको आफूलाई मन परेको ठाँउ घुम्न जानु हो ।३. धनी भएपछि आफूलाई निकै मन परेको तर पैसा नभएर किन्न नसकेको जुत्ता किन्छन् । पसलमा गएर मूल्य नै नसोधी सिधै किनिहाल्छन् । त्यस्तै धनी भएपछि नजिकका साथीभाइ, आफन्त तथा इष्टमित्रलाई पनि केही न केही किनिहाल्छन् ।
४.हरेक मानिसले धनी हुने बित्तिकै कोठा सजाउन आफ्नो रुचि अनुसारका फर्निचर, बेड तथा अन्य सजावटका सामानको सूचि बनाउँछन् र किनिहाल्छन् ।
५.बार, रेष्टुरेण्ट वा होटेलमा भएका बेला चिनेका मानिस भेटिए भने अचानक धनी भएका मानिसलेउनीहरुलाई टन्न रक्सी पिलाइदिन्छन् । केही अपवाद बाहेक यो सबैले गर्ने काम हो ।६. धनी भएपछि गर्ने अर्को काम भनेको दान दिएर समाजमा प्रतिष्ठा कमाउनु हो ।
७.आफूले सधैं तरकारी तथा अन्य सामान किन्ने पसलमा गएर महंगो महंगो तरकारी तथा सामान किन्ने काम पनि धनी भएपछि मानिसले गरिहाल्छन् ।८. ऋणबाट मुक्त हुन साथीभाई, छरछिमेक तथा आफन्तसँग लिएको ऋण वा सापटी छ भने धनी भएपछि तत्कालै मानिसले तिरिहाल्छन् ।९. आफ्नो ऋण तथा सापटी तिरेपछि बाबुआमाले लिएको कर्जा वा ऋण पनि धनी हुनेबित्तिकै मानिसले तिरिहाल्छन् ।
१०.भाडामा बस्दा बस्दा वाक्क भइसकेका मानिसको आफ्नै घर बनाउने सपना रहेको हुन्छ । यो सपना पनि धनी भएपछि पुरा भइहाल्छ ।११.आफूसँग भएको पैसा खर्च हुने डरले धनी भएपछि सेभिङ खातामा प्रशस्त पैसा जम्मा गर्दछन् ।१२. अरुको पार्टीमा गएर खाएको हुनाले धनी हुने वित्तिकै मानिसले भव्य र विशेष पार्टी दिइहाल्छन् ।१३.आफैलाई मन पर्ने सवारी साधन कार वा मोटरसाइकल किनिहाल्छन् ।१४.सबै मानिसको नयाँ फोन, नयाँ ल्यापटप तथा नयाँ टिभी किन्ने सपना हुन्छ । धनी भएपछि यो सपना साकार हुन्छ ।